David Moyes oo shaqada laga fariisiyay - BBC News Somali
Image caption Maamulihii hore ee Manchester United Mr Moyes
Wararka sport-ga waxaa maanta ugu weyn maamulaha kooxda Manchester United, David Moyes, oo shaqada laga saaray kaddib markii kooxdiisu ay sanadkan ka hartay afarta kooxood ee ugu sarreeya tartanka horyaalka Ingiriiska.
Moyes waxaa uu shaqadan hayay muddo 10 bilood ah oo keliya kaddib markii uu jagadaas kala wareegay maamulihii hore ee Sir Alex Ferguson oo muddo dheer soo maamulayay kooxda isla markaana guulo fara badan u soo hooyay naadigiisa.
Ryan Giggs oo kooxda u ciyaari jiray haatanna tababare ah ayaa lagu wadaa inuu sii hayo kooxda oo ciyaarta ugu horreysa la yeelan doonta kooxda Norwich Sabtida soo socota.
Manchester City waxay ciriiri ku haysaa Liverpool taranka loogu jiro horyaalka kubbadda cagta Ingiriiska kaddib markii City ay 3-1 uga badisay West Brom.
Manchester City soo nooleysay rajada ay ka qabto inay horyaalka qaaddo sanadkan.
City oo hadda kaalinta 3aad ku jirta, hal ciyaar oo dheeraad ahna haysata, waxay weli ku tiirsanaan doontaa natiijooyinka ay Liverpool kala kulanto ciyaaraha u harsan.
Caawa waxaa jirta ciyaar semifinal ah oo ka tirsan tartanka horyaalka Yurub oo dhexmaraysa kooxaha Chelsea iyo Atletico Madrid. Labdan kooxood tii badisa waxay kama dambays la ciyaari doontaa Bayern Munch iyo Real Madrid tii soo badisa habeen dambe.